Iskaga Jooji Habkaaga Guud-marka
Dooro Habkaaga Iska Joojinta
Adiga ayaa Go’aanka leh
Qof walba wuxuu leeyahay hab u gaar ah ee iska joojinta. Haddii aad ku fakirayso inaad la hadasho tababare iska-joojinta ama ku fakirayso inaad isku daydo qalabyadeena waxtarka leh oo isku dar ah, sida aad isaga joojin laheed adiga ayaa dooran.
Isbarbar dhig Siyaabaha La isaga Joojiyo
Iskaga Jooji Qalabyo Caawinaad oo Lacag La’aan ah
Isaga jooji sigaar cabidda, cabidda sigaarka elektrooniga ah ama calaajinta tubaakada hab adiga kuu gaar ah adoo dooranaya qalabyada lacag la’aanta ah ee aad rabto inaad isku daydo.
Daawooyin Lacag La’aan ah
Isdiiwaangeli si aad u hesho sharootada (patches), xanjo ama nacnaca lozenges-yada ee nikotiinka oo kugu filan labo usbuuc.*
Farriimo Qoraal ah
Hel talooyin, xusuusinno iyo dhiirrigelin toos loogu soo dirayo taleefankaaga.**
Hel imaylo joogto ah si ay kuu taageeraan inta aad iska joojineyso.**
Iskaga Jooji Tababar Lacag La’aan ah
Kaga hel tababbar qof-iyo -qof ah taleefanka ama online-ka tababarayaal tababarsan oo caawiya dadka adigoo kale ah maalin kasta. Kaliya markaad is-qorto, waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho qalabyadaa lacag la’aanta ah si ay kaaga caawiyaan joojinta sigaar cabista, cabida sigaarka elektrooniga ah ama calaajinta tubaakada.
Tababar lagu sameenayo taleefanka, fariin qoraal ah*** ama khadka internet-ka.
Sharooto, xanjo ama nacnaca lozenges-yada ee nikotiinka*
Farriimaha qoraalka ah**
Xirmo soo dhaweynta
Ka Ogow Wax Sii badan Barnaamijyadeena Iswata
U Diyaar Garowga Iska Joojinta
Baro Wax Dheeraad Ah
Barnaamij Iska Joojinta oo loogu talagalay Dhallinyarada Keliya
Haddii aad tahay dhallinyar ee ah da’da u dhaxaysa 13-17 oo aad rabto in lagaa caawiyo joojinta cabista sigaarka elektroniga, cabista sigaarka ama isticmaalka waxyaabaha kale ee tubaakada ganacsiga ah laga sameeyo, barnaamijkan gabi ahaan lacag la’aanta ah oo qarsoodiga ah ayaa adiga laguugu talagalay.
Khadka-Iska-Joojinta Hindida Mareykanka (American Indian Quitline)
Waxaa lagu sameeyey iyadoo laga helay hagis bulshada, American Indian Quitline waxay bixisaa taageerid gabi ahaan lacag la’aan ah oo si gaar ah loo sameeyey in ay ku caawiso adiga, ama qof aad taqaano, inaad iska joojisaan tubaakada ganacsiga ah. Markaad isdiiwaangeliso, waxaa lagula xiriirin tabarbare u heegan daaweynta tubaakada ee Hindida Maraykanka ah oo fahmaya dhaqamada daaweynta dhaqameed, isticmaalka tubaakada marka munaasabadaha, iyo caqabadaha gaarka ah ee iska joojinta ee ay la kulmayaan dadka ah Hindida Maraykanka ah.
Haddii aad la nooshahay cilladda isticmaalka maandooriye ama jirro maskaxeed, sida walaacyo, PTSD ama cillada dhimirka ee laba-cirifoodka (Bipolar), waan fahansanahay in joojinta nikotiinta ay noqon karto wax aad u dhib badan, sidaa darteed waxaan abuurnay taageero adiga kuu gaar ah si ay kaaga caawiyaan joojinta sigaar cabidda, cabidda sigaarka elektrooniga ah ama calaajinta tubaakada.
Caawinaad Haddii aad Uur Leedahay
Waan fahamsanahay in u-barashada nikotiinka uusan iska tagin kaliya sababtoo ah inaad uur leedahay. Taageerideena oo aan xukun lahay waxay kaa caawini kartaa inaad iska joogiso adigoon ku darin walbahaarka haysashada ilmo yar.
Caawimaada Caafimaadka ama Daryeelka-Minnesota (MinnesotaCare)
Baro sida aad ku heli karto dawooyinka iska joojinta ee dhakhtarku qoro oo lacag la’aan ah adigoo la hadlaya dhakhtarkaaga.
Baro dhowr siyaabood/hab oo aad u wanaagsan oo aad ku bilaawdo ama sii wado iska joojintaada.
Haddii aad Leedahay Caymis Caafimaad
Wac lambarka ku yaala kaarka qorshahaaga caafimaad si aad u ogaatid waxa ay tahay taageerida iska joojinta ay bixiyaan oo u hel caawimaad si degdeg ah.